Global Voices teny Malagasy » Fitempon’ny Tontolom-bolongana Saodiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Avrily 2019 12:48 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Al-Omran Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ndeha hatombontsika amin'ny fandrakofana an'ireo media iraisam-pirenena mikasika an'i Arabia Saodita ny famintinantsika an'ity herinandro ity, izay nisarika ny sain'ireo blaogera marobe. Mandefa fanehoankevitra iray i Mansur tao anatin'ny tantara iray an'ny tranonkala an'ny BBC . Milaza izy hoe:
Nandritra io fotoana io, nandefa tantara  iray novakiany teo amin'ny LA Times mikasika an'ireo Shiites i Saudi Future manao hoe: “Misaotra anareo ry media amerikana, noporofoinareo fa manan-tsaina ianareo, mahafantatra betsaka mikasika an'ireo faritra Saodiana, sy ireo vahoakany. Ary indrindra indrindra amin'izany, tsy maao fanasàna atidoha ianareo!” hoy izy nanoratra. Manana lahatsoratra iray hafa ihany koa izy mikasika ny tsy firaharahan'ireo media amerikana rehefa olana Saodiana no resahana.
On another issue, Ubergirl has an interesting post  comparing the reaction of Saudis to the Danish cartoons and what's going on in Darfur. She says: ……………………Mikasika ny olana iray hafa, nandefa lahatsoratra iray maha liana  i Ubergirl izay mampitaha ny fihetsik'ireo Saodiana amin'ireo sary mahatsikaiky sy amin'izay mitranga ao Darfour. Milaza izy hoe:
Lavitry ny politika, nahavita namaky ny Andro Talata iarahana amin'i Morria i DiDi, ary noheveriny fa tsara ihany ilay boky. Hoy  izy hoe:
Farany, ndeha ho faranantsika amin'ireto lahatsoratra roa ireto ny fitsidihantsika ny faravodilanitra : manao jery todika ny lasa  i Dotsson. Betsaka tamin'ireo zavatra niainany tany Etazonia no mampanembona azy. “Malahelo ny afomanga tamin'ny 4 jolay aho. Malahelo ny fandehanana tany IMAX,” hoy izy. Ary manoratra tsikera mikasika an'ireo tranonkalam-baovao amin'ny teny Arabo  i Mohammed Al Rehaili (teny Arabo), ary mihevitra fa ny Al-Arabiya.net  no mendrika indrindra. “Mahazaka RSS izy ireny ary lafatra ny fifandrimbonana akaiky ataon'izy ireo,” hoy ny nambarany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/01/136191/
 tantara iray an'ny tranonkala an'ny BBC: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/from_our_own_correspondent/4952046.stm
 interesting post: http://ubergirl87.blogspot.com/2006/05/my-thoughts-on-denmark-and-darfur.html
 jery todika ny lasa: http://dotsson.blogspot.com/
 tsikera mikasika an'ireo tranonkalam-baovao amin'ny teny Arabo: http://www.alrehaili.net/blog/2006/04/26/news-web-sites-2/